Nadi မှ ရေးသားသည်။ 21/03/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကျောင်း၊ သင့်မိဘ ၊ကျန်းမာရေးသမားများက အဘယ်ကြောင့်အမျှင်ဓါတ်များများစားရန်ပြောနေသည်ဟုထင်ပါသဘဲ။ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သော်လည်း အကျိုးကျေးဇူးကိုလူတော်တော်များများမသိကြပေ။ အမျှင်ပါသောအစာကိုရွေးချယ်ခြင်းကမခက်ပါ သင်မိးဖိုချောင် ဈေးတွင်လွယ်ကူစွာရှာနိုင်သည်။ သင်ဘာကြောင့်အမျှင်ဓါတ်ကိုစားသင့်သလဲ ဘယ်မှာရှာနိုင်သလဲကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်ခန္ဓါကိုယ်က သင်စားသမျှ အစာအာဟာရကိုမစုပ်ယူနိုင်ပါ။ ထိုကြောင့် အစားအသောက်ပါသောအမျှင်များ အပင်မှရသောအစာက သင်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါလှသည်။ သင်ခန္ဓါကိုယ်မှ အမျှင်ကိုအခြားအာဟာများကဲ့သို့(ပရိုတင်း ဗီတာမင် အဆီ စသည်) တိုက်ရိုက်မစုပ်ယူနိုင်ပါ။ သို့သော် အစာအိမ်တောက်လျောက်ဖြတ်သွားနိုင်သည်။ ရေတွင်ပျော်ဝင်သောအရာ နှင့် ရေတွင်မပျော်ဝင်နိုင်သောအရာဟုခွဲထားပြီ အမျှင်က အစာအိမ်မှ အူလမ်းကြောင်းသိုရောက်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်မှထွက်သွြးခြင်း သို့ဟုတ် ပျော်ဝင်သွာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မတူသောအမျှင်ပါသော အပင်အစားသောက်မတူသောကြောင့် မတူညီသောအမျှင်တိုင်းအကုန်မျိုးစုံစားရန်လိုအပ်သည်။
ပျော်ဝင်နိုင်သော အမျှင်ဓါတ်။ ထိုအမျှင်ဓါတ်က အခွံမာသိပဲသီး ပန်းသီး အချဉ်ပါသောအသီးများ မှန်လာဥ ဘာလီသီးစသည်တို့တွင်ပါဝင်သည်။ ရေတွင်စိမ်ပါက ပျော်ဝင်သည်။ သကြားဓါတ်နှင့်ကိုလက်စတောကိုကျစေသည်။
မပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်။ ထိုအရာက အရွက်များ(ဥပမာ ဂေါ်ဖီ ပဲသီး အာလူး အစရှိသည်) အသီများ အစေ့ ဂျုံ နှင့် ပါမှန့်စသည်တို့တွင်ပါဝင်သည်။ ထိုအမျှင်များက ဝမ်းချုပ်ြခ်ငကိုကုသနိုင်ြခ်ငး ပုံမှန်မဟုတ်သော အူလှုပ်ရှားမှုကိုပိုကောင်းစေခြင်း ဝမ်းမှန်စေသည့်အရာမျိုးတွင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
အမျှင်ဓါတ်များစွာပါဝင်သောအပင်မှရသောအစားကိုနေ့တိုင်းစားသင့်သည့် အဓိက အကြောင်း၄ချက်ရှိသည်။
အူလှုပ်ရှားမှုကိုထန်းရန်။ အမျှင်က ဆေးသောက်စရာမလိုပဲ အူလမ်းကြောင်းလှုပ်ရှားမှုကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ ဝမ်းချုပ်နေပါက အမျှင်က ဝမ်းကို အူလမ်းကြောင်းမှလွယ်ကူစွာဖြတ်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဝမ်းလျောနေပါက အမျှုင်က ရေ
ကျန်းမာသောအစာချေစနစ်ဖြစ်ရန်ကူညီပေးသည်။ အမျှင်ဓါတ်များသောအစာများက အူလမ်းကြောင်းတွင် အိတ်သေးလေးများဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်နှင့်ကိုလက်စတောပမာဏကိုထိန်းသိခြင်း။ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်စုပ်ယူခြင်းကိုလျော့ခြပေးခြင်း ကိုလက်စတောနည်းစေခြင်းတို့ဖြစ်စေသည်။
ကျန်းမာသောခန္ဓါကိုယ်ကိုရစေသည်။ ဗိုက်ကိုအမြန်တင်းတိမ်စေသည်။ ထိုကြောင့် သင်ဝတ်ကိုလဲကျစေသည်။
အသီးအရွက် ပဲသိး ကောက်စပါးအပြည့်ပါသောအစေ့ အမျှင် များက ကျန်းမာရေးကောင်းရုံစေမျှမက ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆီးချိုနှလုံးရောဂါကိုလျော့ခြခြင်း ဝမ်းမချုပ်စေခြင်းစသည့်ကောင်းကျိုးများစွာရှိသည်။ အမျှင်ကနေရာမျိုးစုံမှရနိုင်ပြီး အင်အားအပြည့်အဝရနိုင်ရန် သင်နေ့စဉ်အစားအသောက်ထဲထည့်ပုံကိုသိသင့်သည်။
High-Fiber Diets and Weight Loss. http://www.webmd.com/diet/features/fiber-weight-control#1. Accessed November 3, 2016.
Dietary fiber: Essential forahealthy diet.http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/fiber/art-20043983. Accessed November 3, 2016.
Chart of high-fiber foods.http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/high-fiber-foods/art-20050948. Accessed November 3, 2016.
Maple Syrup ကျန်းမာစေသလား